Tabula Alumina, Alumina Biriky, Takelaka Alumina - Almelt
Ny vokatra lehibe dia misy ny baolina fikosoham-bolan'ny alumina, ny kofehy famenoana tsy fanadinana alumina amin'ny fahadiovana, ny valizy vita amin'ny keramika tsy mahazaka, ny fantsom-baravarankely, ny fantsom-pakoam-bozaka tsy mahazaka alumina, ny seramika tantely ary ny faritra samihafa tsy mahazaka.
Takelaka sivana vita amin'ny keramika
Baolina feno famenoana inert-madio
Biriky mifono Alumina
Taila mosaic fanoherana
kitapo fizarana alimina solika kitapo kitapo gla ...
milina fanadiovana baolina alumina fifanakalozana hafanana ba ...
Manam-pahaizana azo itokisana amin'ny indostrian'ny vokatra alumina
Qingdao Almelt Ceramic Co., Ltd dia sampan'ny HK Almelt Co., Ltd, izay miorina ao amin'ny faritra fampandrosoana Qingdao, Faritanin'i Shandong. Orinasa midadasika izy io miaraka amin'ny baolina alimina, baolina fenoina, biriky mitafy tsy mahazaka, zam-baravarankely vita amin'ny zirconium-aluminium ary vokatra hafa no mitarika, mampiditra ny famolavolana ny vokatra, ny R&D ary ny varotra.
Almelt dia mavitrika amin'ny indostrian'ny vokatra vita amin'ny seramika ary manana traikefa manondrana any Alemana, Aostralia, Etazonia, India, Brezila, Afrika Atsimo, Azia atsimo atsinanana ary toerana hafa.
Serivisy tsara kalitao tsara kokoa
Dec-07-2020 Ny kamiaona manaparitaka vovoka feno automatique Fralco dia napetraka tao Neimenggu
Nov-11-2020 Fampiharana desiccant baolina Alumina & Fanamafisana ny baolina alumina mihetsika
Nov-11-2020 Aiza ny bola Alumina no tena fampiasa?
Nov-11-2020 Inona avy ireo anton-javatra misy fiatraikany amin'ny baolina alimina?
Qingdao Almelt Ceramic Co., Ltd dia sampan'ny HK Almelt Co., Ltd, izay miorina ao amin'ny faritra fampandrosoana Qingdao, Faritanin'i Shandong. Orinasa midadasika izy io miaraka amin'ny baolina alimina, baolina fenoina, biriky mitafy tsy mahazaka, zam-baravarankely vita amin'ny zirconium-aluminium ary vokatra hafa no mitarika, mampiditra ny famolavolana ny vokatra, ny R&D ary ny varotra. Ny vokatra lehibe dia misy ny baolina fikosoham-bary alumina, baolina feno fanadiovana tsy feno fanadinana alumina, valizy vita amin'ny keramika tsy mahazaka, fantsom-baravarana vita amin'ny seramika, fantsom-seramika tantera-bozaka, seramika tantely ary faritra samihafa mahazaka akanjo。